Taariikhda My Butros » Sidee ayaad ku ogaan Ma Tahay In Love?
Last updated: Sep. 23 2020 | 3 min akhri
Waxaan xusuustaa markii ugu horeysay ee aan jacayl u dhacay. Oo anigu waxaan qabaa in runta laga yaabaa in ay tahay in aad wax ka ogaato waxa aad qalbiga ka dhakhso leh. Waad ogtahay farqiga u dhexeeya dhammaan burburiyo kuwa iyo dareemo adag oo aad lahaa dadka iyo habka aad u dareemayso ku saabsan hal qof this. In isagoo sheegay in, sida aad ku ogaan karaysa hoos u sababo dhawr ah oo aan hoos ku qoran.
Marka aad u jeclahay qof aad tahay ee aad ugu nugul. Waxaad doonaysaa in aad ka farxisid, iyaga caddayn, iyaga faraxsan. Waxaad dhahdaa ay lumiyaan boorsada tusaale ahaan waxaad tahay qofka ugu horreeyo raadinaya, waxaa ka. Oo ma aha in jidkaas ee 'Oh, in qofka saboolka ah laga badiyay boorsada.’ Waa dheeraad ah ka sii mool dheer in. Waxaad qaadan karin wax kasta oo xun iyaga ku dhacaya. Waxay aad u wanaagsan qofka waa wax xun in ay dhacaan iyaga. Oo aanay u qalmin wax xun in ay dhacaan iyaga. Waxa ay aad u furay ilaa dareenka ah in aad u malayseen kama jiro, waana wax ka badan cajiib ah ka badan aad yaabaa abid damcaan. Waxa aad ku bilaabi gelayno music ee ay jecel yihiin. Marna ma ogaan, waxaa laga yaabaa in kaliya bilowga wada hadalka. Iyo haddii ay xiliyo, sidaa darteed waxa ay noqon. Farxaddii aad ka hesho sida aad u dareemayso ka awood badan mid ka mid ah dhaawicii (ama waali dhow!) in aad dareensan tahay sababta oo ah iyaga ma aad yeelan karaan. Sidaas asal ahaan jirtay nugul oo laga badiyay in wax walba oo iyaga ku saabsan malaha waa habka ugu muhiimsan ee aad ku ogaan lahaa iyo idinkoo og inaad idinka siin lahaa oo dhan riyada inay iyaga la joogaan aad. Waxaan qabaa in ay u badan tahay sida aan ogaa sababtoo ah waxaan ahay nin hami iyo waxa ugu dambeeya ee aan doonayo waa in la soo gabagabeyn hoos u yar yar laakiin haddii uu i soo laabtay doonayay lahaa iyo in uu doonayo in aan dago waan ogahay waqtiga Waxaan jeclaan lahaa isaga oo aan ogahay ma samayn lahaa waayo, nin walba.
Ka hadalka ku saabsan iyaga Joogto
Tani waa mid ka mid ah way adag tahay sababtoo ah waxaad leedahay taasi oo ku saabsan dadka aad leedahay burburiso on sidoo kale laakiin waa arrin ku jirtay jacaylka aad u. Waxa kaliya in ay sii dheer in qodobo kale oo ku jira liiskan ayaa marka aad jacayl sida ka soo horjeeda la infatuated. Waxaan xusuustaa badan oo si walaashay ah oo ku saabsan nin aan jiray jacayl leh. Ma aan sheegi laakiin iyadu ogaa. Waxay qirtay ayay yeelaysay da 'ka dib sababta oo ah waxaan xidhay-up laga yaabaa oo ku saabsan sida cajiibka ah waxa uu ahaa, sida funny uu ahaa, sida nooca uu ahaa, sida uu ii waxaa ka mid ah lahaa, mid ka mid ah xishood, sheekaysiga.
In ka badan Happy iyaga waxaad Tusida Attention
Haa, waxaad ka heli kartaa oo aad u faraxsan qof aad sheeegateen oo muujinaya nooc kasta oo dareenka, laakiin marka aad u jeclahay qof waa wax ka badan in. Waxa uu dareensan yahay yara eg xiriir ah. In ay nolosha wada hadlayeen in aad! Taas oo u muuqata waxoogaa murugo leh, laakiin waa wax caadi ah marka aad u jeclahay qof sababtoo ah waxaad arki iyagoo kaamil ah sida meel aadan arki naftaada sax ah. Oo markii ay xuso magacaaga u muuqataa sidii luuq ah. Sida waxa ugu yaabka leh aad weligaa maqashay. Oo markii aan dhihi xiriir waxa ay noqon kartaa xiriir jaceyl, laakiin haddii ay xiliyo, waxay noqon kartaa xiriir saaxiibtinimo ah. Taasu waa hadii ay dib u aadan jeclahay laakiin aad jeceshahay in aad wali rabto in aad noloshaada in awoodda qaar ka mid ah, waana u furan in ay ka doodaan hadii ay noqon lahayd xaaladda caafimaad ee dunida laakiin waxa hubaal ah sida ay dareenka aadanaha ee shaqada play.
Waxaa jira iyo xiiso qoto dheer si ay u noqon in ay shirkadda iyo marka aad u malaynayso inaad marna ma arko mar kale waxaa jira dareen madhan tan gudaha. Waa ciqaabta ahaantii. Markaas haddii aad leedahay a cabitaan yar, way ka sii xumaanaysaa. Waxa aad ku bilaabi oohinta. Oo waxaa laga yaabaa in aadan dareemi lahaa sida in ka badan burburin ah. Waa dareen madhan oo aan iyaga ka qabo in noloshaada iyo dareen ah sida aad noloshaada marna ay noqon doontaa dhamaystiran iyaga oo aan. Sida waa nolosha badh. Wax walba oo aad gaari ma laha doonaa. Laakiin waxaad ka heli marayo in. Waa wadada dheer laakiin aanad ka soo bixi dhinaca kale.